Fanatanjahantena Qi Gong Voasakana noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana
Nisy ny fampahafantarana ho an’ny rehetra ny amin’ny Qi Gong eto Madagasikara tetsy amin’ny ivontoeran’ny kolontsaina malagasy etsy Antsahavola omaly alarobia 31 jolay.
Araka ny fanazavan’ny mpampianatra azy, Julia Rakotomalala, dia sady kolontsaina no fanatanjahantena izy ity. Fahasalamana no zava-dehibe azo avy amin’ity taranja aziatika ity ary amin’ny alalan’ny fampaherezan-tsaina mipaka any amin’ny vatana no hahombiazana aminy. Io, hoy hatrany ny fanazavana, no maha ela velona ny sinoa sy mampavitrika azy hiasa satria ny aretin’ny saina na « psycho somatique » no miteraka ny aretina rehetra ary ny olona manao Qi Gong dia tsy ho azon’izany. Na dia tokony hanana anjara biriky betsaka amin’ny fampandrosoam-pirenena aza anefa ity taranja ity dia voasakana ihany noho ny tsy fahampian’ny enti-manana amin’ny fanentanana, hoy hatrany ny tomponandraikitra, ary tsy mihoatra ny 30 isa hatreto ireo mpikambana ao anatin’ny fikambanana manao azy eto Madagasikara.